Online mampiaraka dia mety ho azo antoka kokoa noho ny nentim-paharazana traikefa mampiaraka. Manome anao ho sehatra midadasika kokoa ny safidy ary afaka mijanona eny lavitra eny mandra vonona ny hihaona.
Raha mbola tsy nanandrana azy eo anoloan'ny na raha toa ianao ka manahy misy tantara mety efa nandre, Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy mba hahazo anao soa aman-tsara miaraka amin'ny aterineto:
Atokisana ny voajanahary. Raha misy zavatra tsy mahatsapa marina, Nahoana no maka vintana. nitsahatra ny handray anjara soa ny molony, raha tsy miasa, nitsahatra ny handray anjara fotsiny.
Hitandrina izany tena. Aoka ho marina araka izay azonao atao, rehefa namorona ny mombamomba azy, ianao tsy te-manaiky ho voafitaka ianareo, ka tsy hamitaka ny olona. Izany ihany koa ny tena sarotra ny mody ianao 6'2″ rehefa tena 5'6″!
Post a sary, ho azo antoka fa tsy afaka mamantatra ny fianakavianao, namana, an-trano na ny fiara ao aminy.
Foana amin'ny fanaraha-maso. Aza kivy misy mombamomba ela loatra na lahatsoratra mombamomba nefa tsy fantany tsara ange fa ianao no manome izany ho.
Arovy ny maha. Ampiasao ny toerana tahaka ny antsika izay manafina ny adiresy mailaka sy ny fifandraisana vaovao.
Aza misy resaka ny lafiny ara-bola loatra avy hatrany. Tsy misy antony tokony mbola hamoaka misy vaovao ara-bola an-tserasera.
Aza manaiky ho voafitaka ny fangatahana fanampiana ara-bola, raha misy olona manontany anareo ho vola na dia efa nanao ny matoky ny rapport aminy, Azo antoka fa izy ireo dia scammer.
Aza mety ho voatery hanome ny filazalazana na sary izay tsy te-ary indrindra ho fihaonana eo anatrehan'i vonona ianao.
Raha azonao antoka ianao, mangataka vao haingana sary ny hoe iza ianao miresaka.
Eritrereto izay manoratra ao amin'ny mombamomba azy ary rehefa Niady hevitra. Ve izany feo mampita ny tsara sy ny fikasany?
Mitandrema ny olona izay hoy ny tsy mety lefy tia anao, indrindra fa raha tsy mbola nihaona taminy.
Rehefa vonona ny hihaona, jereo ny in-olona mampiaraka fiarovana torohevitra ambany
In-Olona Safety Advice Dating
Mampiaraka amin'ny alalan'ny asa fanompoana an-tserasera toy ny antsika dia azo antoka traikefa fa ny zozoro ny fientanentanana fa indraindray mora ny manadino ny hitandrina azy toy izany.
Mety mihevitra ianao efa nihaona ny aterineto daty ny nofiny na angamba ianao hafahafa fotsiny fa efa nanaiky ny hihaona. Mety ho za-draharaha, na angamba dater niverina ny mampiaraka taorian'ny fifandraisana efa tapitra fa eto ny sasany teny amin'ny torohevitra haingana ireo noho izy ireo ny:
Aza atao nanosika ho daty, ary azo antoka fa tsy manome ny tsipiriany ny fifandraisana manokana raha tsy mahazo aina ianao hanao izany. Aza manome avy ny an-trano na ny birao adiresy tanteraka raha tsy ianao matoky fa fantatrao, ary afaka matoky ny daty.
Aza na iza na iza miresaka momba ny firaisana, na vola eo anatrehanao nihaona mihitsy aza izy ireo. Mitandrema ny olona izay tsy mety lefy hoy tia anao koa avy hatrany.
Rehefa mivory ho an 'ireo daty vitsivitsy voalohany, mifidy ny tsy miandany-bahoaka toerana izay mora mora ho anareo roa, ary dia ao anatin'ny fomba fijery ary ny tori halavirana ny olon-kafa.
Lazao fa matoky olona iray izay ianao fihaonana, izay alehanao, ary inona no fotoana kasainao ho any. Raha ny drafitra miova aza adino ny manome fanavaozam-baovao.
Ataovy amin'ny olona mba "hijery in’ isaky ny adiny ary ny kolaka izany fomba nilaza azy ireo ny fomba izany no mitranga, indrindra fa raha mila fanampiana.
Atokisana ny voajanahary, raha mihevitra misy zavatra tsy mety, dia tokony hanao ny fialan-tsiny tamim-panajana sy handao.
Aza miantehitra amin'ny daty ny fitaterana na avy amin'ny pivoriana, indrindra drafitra ny handeha an-trano Raha mila miala tampoka. Manana ny taxi maro mora raisina raha toa ka mila ny.
Raha tsy maintsy mandeha an-trano miaraka amin'ny fiarakaretsaka, miezaka ny ho nandatsaka eny farany, fara fahakeliny, nefa tsy mampiseho ny daty marina misy anao.
Mitandrema amin'ny toaka mba hitandrina ny wits momba anao. Raha mieritreritra ny sakafo na ny zava-pisotro no hosimbaina dia tsy lanin'ny.
Ataovy azo antoka ianao manana finday nandrara tanteraka amin'ny ampy minitra.
Fanajana fa ny daty mety hanana ahiahy toy izany koa ary aza manosika azy ireo ho eo an hanao na inona na inona izy tsy mahazo aina miaraka amin'ny.